ဟောခန်းသို့တစ်ခေါက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » ဟောခန်းသို့တစ်ခေါက်
Posted by etone on Oct 20, 2011 in Short Story | 31 comments
လူ့လောကတွင် မယောင်ရာ ဆီလူးနေသည့် လူများစွာရှိသည် ။ မဟုတ်သည်ကို အဟုတ်ထင်၍ ထင်ယောင်ထင်မှား ယောင်ဝါးဝါးဖြစ်သူများလည်းရှိသည် … ။ ကြမ်းပိုးကို လိပ်ဖြစ်အောင် ပြောတတ်သူ လူလည်တို့သည် … အယုံလွယ်သူတို့အပေါ်တွင် အဓိက အမြတ်ထုတ်တတ်ကြသည် ။ အယုံလွယ်သူများကလည်း … မိမိဥစ္စာလိမ်သွားခံရမှန်း မသိလောက်အောင် ရက်ရောကြသည် … ။ ထိုလူများဧ။် အဖြစ်သည် ရယ်စရာကောင်း ၊ သနားစရာကောင်းသလို … ဂရုဏာဒေါသလည်း ထွက်စရာကောင်းလွန်းလှသည် ။
ဒီပို့စ်လေးကို မဖတ်ခင် မေးခွန်းလေး နည်းနည်းတော့ ဖြေပေးကြပါဦးနော် ။
၁။ ။ ဗေဒင်၊ အကြားမြင် ၊ယတြာဆိုတာမျိုးကို သင်တို့ လက်ခံယုံကြည်ခဲ့ကြသလား ။
၂။ ။ ယတြာချေရုံဖြင့် သင်တို့ ကံကြမ္မာကိုပြောင်းလဲနိုင်ပြီဟု ထင်ပါသလား ။
၃။ ။ ဓါတ်ရိုက်ဓါတ်ဆင်လုပ်ခြင်းဖြင့် ကြံတိုင်းအောင် ၊ ဆောင်တိုင်းမြောက်မည်ဟု သင်ထင်ပါသလား ။ သင်ဧ။် ကံကောင်းလာမည်ဟုထင်ပါသလား ။
၄။ ။ မည်ကဲ့သို့သော ဗေဒင် ဟောခန်းသို့ရောက်ဖူးပါသလဲ ။ ၄င်းတို့ဧ။် ရှေ့ဖြစ် ၊နောက်ဖြစ် ဟောပြောချက်များသည် မှန်ကန်သည်ဟု လက်ခံရုံကြည်ပါသလား ။
ကျွန်မ ငယ်စဉ်ကတည်းက ဗေဒင် ၊ အကြားမြင် ၊ တားရော့ စသည်တို့ကို အယုံကြည်မရှိသော်လည်း ဗေဒင်ဟောခန်းမျိုးစုံဆို့ ကျွန်မဧ။်ကြီးတော်များကောင်းမှုဖြင့်ရောက်ဖူးခဲ့သည် ။ တစ်ကြိမ်နှင့်တစ်ကြိမ် မတူညီလောက်အောင်ပဲ ဗေဒင်ဆရာ ၊ဆရာမတို့ဧ။် ဟောခန်း အပြင်ဆင်ကွာခြားပုံများ ၊ ဟန်ပါပါ မာန်ပါပါ ပြောပြပုံများ ၊ စသည်တို့ကိုလည်း တအံ့တသြမြင်ခွင့်ရခဲ့သည် ။
ဟောခန်း တစ်ခုနှင့်တစ်ခု မတူအောင်ပင် ဗေဒင် ဟောပြောသူဧ။် စီးပွားရေး ကောင်းမှုပေါ်မူတည်ပြီး အပြင်ဆင် ၊ အဆောင်ယောင် ကွာခြားသွားသည် ။ တစ်ချို့သော ဗေဒင်ဆရာများသည် မုတ်ဆိတ်ပါးသိုင်းများထားတတ်ပြီး ၊ ယောဂီသို့မဟုတ် … ၀တ်ဖြူစင်ကြယ် ၀တ်ဆင်ကြသည် ။ တစ်ချို့သော ဗေဒင်ဆရာမများသည် ဗေဒင် အယူဖြင့် စီရင်ထားသော လက်ဝတ်ရတနာများကို ဆင်မြန်းထားပြီး မျက်ခုံးမွှေး ထူထူများစွဲတတ်ကြသည် ။တစ်ချို့သော ဗေဒင်ဆရာမများသည် ရှိသမျှ လက်ကောက်များ အကုန်ဝတ်ဆင်ပြီး ဗေဒင်ဟောသောအခါ တချွင်ချွင်မြည်သံနှင့်အတူ လူစိတ်ဝင်စားမှုရအောင် ပြုလုပ်သည် ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သူ့နည်း သူ့ဟန်နှင့် ဗေဒင်ဟောသူ အများပြားရှိသည် ။ နောက်ဖြစ်ကိုသာ ပြောနိုင်သူများပြီး ရှေ့ဖြစ်ကို မှန်အောင်ပြောနိုင်သူနည်းကြသည် ။ ထို့အတူ .. အတုယောင်အလိမ်များလည်း များစွာရှိသည် ။
မနက်စောစော တတီတီမြည်လာတဲ့ ဖုန်းကို လေးဖင့်စွာဖြင့် ကောက်ကြည့်လိုက်သည် …. ။ ဖုန်းမှာပေါ်နေသော နံပါတ်မှာ မတော်ရသေးသော ယောက္ခမအိမ်မှ နံပါတ်ဖြစ်သည် ။စောစောစီးစီး ဒုက္ခပေးမည့်ယောက္ခမဖြစ်သော်လည်း …. ဖုန်းမကိုင်ပဲမနေသာသဖြင့် … သမ်းရင်း ဖုန်းထူးမိလိုက်သည် …. ။
“ဟုတ်ကဲ့ အန်တီ ပြောပါ …. ”
“အော်အင်း … သမီးနိုးပြီလား … အန်တီ ဒီနေ့သွားစရာရှိလို့လေ … လိုက်ခဲ့ပါဦး #@!%^& ” ဟုဆိုကာ ဖုန်းချသွားသည် … ။
ပြေးကြည့်လျှင် တွေးကြည့်တာထက်ပင်မြန်သည် …. သွားစရာရှိလို့ဟူသောနေရာမှာ ဗေဒင်ဟောခန်းကလွဲ၍တခြားနေရာမဖြစ်နိုင် ။
တစ်ဦးတည်းသော သားကို ပိုင်ဆိုင်သည့်မိခင်မို့ သားအတွက်ဆို ဂရုတစိုက် အသေးစိတ်ကအစ ဘာပဲလုပ်လုပ် ဗေဒင်ဆရာနဲ့တိုင်ပင် နေ့နံရွေးပြီးမှသာ လုပ်တတ်သော အကျင့်ရှိသူကို ကြင်နာတတ်သည်ဟု ပြောရမလား ၊ ဗေဒင်ကိုယုံစားသူ ဦးဏှောက်မရှိသူလို့ပဲပြောရမလား ကျွန်မဝေခွဲမရပါဘူး ။ ဗေဒင်ကို လွန်လွန်ကျူးကျူးယုံတတ်တာကလွဲလျှင် အရမ်းကို မိခင်တာဝန်ကျေပွန်တဲ့ လူတစ်ယောက်ပေါ့ … ။
သေချာ အကွက်စေ့စေ့ လုပ်တတ်တဲ့ အန်တီက ဗေဒင်ဆရာဆီ မရောက်မီ ကြိုတင်ဘိုကင်လုပ်ထားသော ကျေးဇူးကြောင့် ကျွန်မတိုက အရင်ဝင်ခွင့်ရသည် … ။ သီးခြား ဆွေးနွေးခန်းဖြစ်သဖြင့် ကိုယ့်အလှည့်ရောက်မှသာ အတွင်းခန်းသို့ဝင်ကာ ပြောဆိုဆွေးနွေးခွင့်ရသည် ။ ၀ါကျဉ်ကျဉ် မီးထွန်းထားသော အခန်းထဲတွင် ဂမ္ဘီရ အပြင်ဆင်များဖြင့် ပြည့်နှက်နေသည် … ။ တစ်ချို့ ပုံများသည် ကျွန်မ တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးသော ပုံများတောင်ပါသေးသည် …. ။ ထိုအခန်းထဲတွင် ဘုရားခန်းလည်းရှိသည့်အပြင် နတ်ရုပ်ပေါင်းများစွာ ရှိသော နတ်ကွန်းလည်းရှိသည် ….။အမွှေးတိုင်း ၊ဖယောင်းတိုင်များကိုလည်း ထိန်ထိန်ညီးအောင် ထွန်းထားသည် … ။ ပထမဆုံးကျွန်မသတိထားမိသည်မှာ … ဗေဒင်ဆရာမဧ။် မျက်လုံးနှင့် မျက်ခုံးပင် … ။
ရွှန်းလဲ့သော မျက်လုံးများသည် ကြည်လင်တောက်ပနေပြီး …. မျက်ခုံးထူထူ(ဆွဲထား ၊ဆေးထိုးပုံဖော်ထားသော) မျက်ခုံးမွှေး ထူထူ နှစ်ခုသည် ပြတ်သားသည့် အသွင်ပြင်ကို ဖော်ဆောင်သည် …။
ကျွန်တို့ နှစ်ဦး ငုတ်တုတ်လေး ထိုင်သည်အထိ သူမက မရယ်မပြုံး ၊ မမှိတ်မသုန်သော မျက်ဝန်းမျာဖြင့် အသံတိတ် ကျွန်မတို့ကို ကြည့်နေသည် …. ။ ဗေဒင်ခန်းထဲသို့ရောက်လျှင် ကျွန်မစိတ်တွေအမြဲလိုလို ကျဉ်းကြပ်ရတော့သည် … ။ ကျီးကန်းတောင်းမောက် ပတ်ချာလည် လိုက်ကြည့်နေသော ကျွန်မအတွေးတွေ …. သူတို့နှစ်ဦးစကားစမြည်ပြောတော့မှ ပြတ်တောက်သွားတော့သည် … ။
ဗေဒင်ဆရာမက ရေမွှေးပုလင်းကို သူမ မျက်နှာတစ်ဝိုက်သို့ တရှီးရှီး ဖြန်ရှေးဦးစွာဆိုလေသည် … ။ (သူမမျက်နှာရှေ့ဟုဆိုရာတွင် သူမမျက်နှာဘက်သို့လှည့်ဖျန်းခြင်းမဟုတ်ပဲ … ဟော့ခံမည့်လူဘက်သို့လှည့်ဖြန်းခြင်းဖြစ်သည် … ) မှုန်ပွားပွားကျလာသော ဘာတံဆိပ်မှန်းမသိသည့်ရေမွှေး ပါးစပ်ထဲဝင်မည်စိုးသဖြင့် လက်ဖြင့်ပိတ်လိုက်မိသည် … ။ ထုံအီအီ ဘာအနံ့ကြီးမှန်းမသိသည့်ရေမွှေးဖျန်းပြီးနောက် …စိတ်တို့ပို့ပြီး ညစ်ညူးလာသည် … ဖယောင်းတိုင်များမှ ညှော်နံ့၊ အမွှေးတိုင်များမှ အနံ့ များကလည်း လေ၀င်လေထွက်မရှိသော ထိုအခန်းတွင် … အသက်ရှုကြပ်စေသည် ။
“ကဲသမီးကြီး သားကိစ္စလားဟေ့ ”သမီးကြီးဟုဆိုသော်လည်း …. အန်တီ့အသက်မှာ ထိုမိန်းမထက် အတော်ပင်ကြီးနေကြောင်းသတိထားမိသည် … ။
“ဟုတ်ပါတယ် မယ်တော် …သမီးရဲ့သား ကိစ္စနဲ့လာတာပါ ….. ” အန်တီကလည်း ယောင်ယော င်အမ်းအမ်းသံယောင်လိုက်ကာ ပြောသောအခါ … ကျွန်မအတွက် အလွန်ရယ်စရာကောင်းသော ဟာသတပုဒ်ကြည့်ရသလို ရယ်ချင်နေတော့သည် … ။ အသံထွက်ရယ်လို့မဖြစ်သဖြင့် … မီခိုးမွှန်သည်ဟူသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် နှာခေါင်းကိုလက်ဖြင့်ကာထားရာမှ …ပါးစပ်ကိုပါရောကွယ်ပြီး …ပြုံးဖြီးဖြီးလုပ်မိတော့သည် …။
သူမတို့ ဆယ့်ငါးမိနစ်ခန့် … @!#$%^&%*& ပြောခြင်းသည် ကျွန်အတွက် အလွန်ရယ်စရာကောင်းတော့သည် သို့သော် … လာရင်းကိစ္စပြီးပြတ်မှသာ အိမ်ပြန်ရမည်ဖြစ်သဖြင့် ဗေဒင် ဟောခြင်းမြန်မြန်ပြီးပါစေဟုသာ ပြုံုးဖြီးဖြီးမျက်နှာဖြင့် … ကြိတ်ဆုတောင်းနေမိတော့သည် ။ သို့သော် …အသံတိတ်ဖြင့်သာ
ဗေဒင်ဟော၍ပြီးသောအခါ …သားဖြစ်သူ နယ်ပြောင်းရမည် မပြောင်းချင်ပါက အစီအရင်လုပ်ပေးမယ် ယတြာကြေးနည်းနည်းပေးရမည်ဟုပြောသဖြင့် …. အန်တီလည်း ပေးမည်ဟုသဘောတူလိုက်သည် ….။ မည်မျှပေးရမည်ကို ပေးသောအခါ … တသိန်းခွဲဟု သိသဖြင့် … တစ်ချိန်လုံးရယ်ချင်နေခဲ့သော ကျွန်မ … ဆက်၍ပင် မရယ်နိုင်ပါ ။ ရူးကြောင်ကြောင်နေလှသူ ယောက္ခမလောင်းက ဒီကိစ္စမျိုး အယုံကြည်ရှိသူဖြစ်သဖြင့် … မဆိုင်းမတွ ထုတ်ပေးမည်အလုပ် …. ကျွန်မခေါင်းထဲဝင်လာသော အကြံကို အမိအရ ဆုပ်ကိုင်လိုက်မိသည် … ။
ငုတ်တုတ်အနေထားမှ လေထဲသို့ နှစ်ပေလောက်မြောက်အောင် ခုန်ပြီး ” တယ်……. ငါ့နတ်နန်း ဘယ်သူ ၀င်နေတုန်းဟဲ့ … အမှိုက်မ … မဆိုင်းမတွ ကူညီလိုက်ဟယ် …”
” ရှင် … ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့…. ဒါနဲ့ ….အခုအမိန်ရှိသူ မယ်တော်က ဘယ်သူများလဲနော် ” လို့ ဗေဒင်ဆရာမက မယုံတ၀က်ယုံတ၀က်နဲ့ အစ်ပါသည် ။
“တယ် …. ငါဟဲ့ … ငါ … ။ ငါ အမြဲနေတာ …ဒီနတ်နန် … ဘယ်သူလည်း မေးစရာမလိုဘူးဟဲ့ ….ငါဆိုတာ ဟိုမှာ ” ဟုဆိုကာ နတ်ကွန်းပေါ်မှ နတ်ရုပ်တစ်ခုကို ညွှန်ပြလိုက်သည် …. ။
မထင်မှတ်လောက်အောင် အမူယာပြောင်းပြီး ဗေဒင်ဆရာမမှာ ကြက်သေသေသလို ပြားပြားဝပ်သွားတော့သည် … ။
” ဟဲ့ … သူ့ပိုက်ဆံမယူနဲ့ နင့်စေတနာနဲ့ အလကားလုပ်ပေးလိုက်ကြားလားသားတော်လေးကို ငါစောင့်ရှောက်တယ်ကွဲ့ … ကဲကဲ … ငါပြန်ထွက်တော်မူမယ် … လိုရာဆုတောင်းကြ ” ဟုဆိုကာ ကြည့်ထားဖူးသော ရုပ်ရှင်ထဲမှ အိုက်တင်မျိုးဖြင့် ယောက္ခကြီးပေါင်ပေါ်သို့ခေါင်းပစ် လှဲချလိုက်တော့သည် … ။ အူလည်လည်မျက်နှာပေးနှင့်ထကာ ဘာဖြစ်သွားလဲဟု မေးကြည့်တော့ …. ။ သမီးခဏနတ်ဝင်သွားတာတဲ့ ….
ထိုနေ့က ကျွန်မတို့ အပြန်လမ်းသည် ယခင်ကနှင့်မတူပဲ တိတ်ဆိတ်နေတော့သည် ပိုက်ဆံမကုန်ခဲ့ရသော ယောက္ခမကြိသည်လည်း နတ်ဝင်ခဲ့သူကျွန်မကို ပိုလို့ ဂရုစိုက်သည်ကိုသိရသည် … ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ … လိမ်လည် လှည့်ဖျားမှုတစ်ခုတော့ … အနုနည်းဖြင့်ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သည် ။ ဗေဒင်ဆရာကို ယတြာအတွက်ပေးမည့်ပိုက်ဆံအား … လူကြီးသူမများအတွက်ခြင်းတောင်းများ ၀ယ်၍ပေးလိုက်လျှင် မျက်နှာပန်းပိုလှမည်ဟုသာ တွေးရင်း …. ပီတိပြုံးမျာဖြင့် အိမ်ပြန်ခဲ့ပါတော့သည် … ။
(ကိုယ်တိုင်ကြုံတာမဟုတ်ပါဘူး …သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်ပျက်လေးကို သူ့နေရာက ခံစားပြီးရေးပြလိုက်ခြင်းပါပဲ … နတ်ဆိုလို့ သူမဘယ်နတ်မှမသိတာကြောင့် လက်ညှိုးလျှောက်ထိုးတာပါတဲ့ … မှတ်သားလောက်ပါတယ်နော် …ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မအတွက် ကုန်ကြမ်းတစ်ခုတော့ရသွားပါတယ် … )
အဲဒီအချိန် အီဒုံ ဆိုရင်ရော ဘာလုပ်မလဲ ?
etone ဆိုလျှင် နတ်ဝင်ရင်း .. ဗေဒင်ဆရာမကိုပါ ခေါင်းပွတ်၊ကျောပွတ် လုပ်ခဲ့ဦးမှာ သာမန်အချိန်ဆို သူတို့က မျက်လုံးပြုံးကြီးနဲ့ အသားထိဖို့မပြောနဲ့ … မျက်စိနဲ့ တည့်တည့်တောင် ကြည့်ဖို့မရဲဘူး
ဟဟဟ ရီရတယ်….. မသိပါဘူး မအိတုံး ၂ ပေလောက်မြင့်အောင် ခုန်ပြီး နတ်ဝင် ချင်ယောင်ဆောင် တာကို မျက်စိ ထဲက မထွက်ဘူး…
မေးထားတဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေရအုံးမယ်..
(1) ဗေဒင်၊ အကြားမြင် ၊ယတြာဆိုတာမျိုးကို မယုံကြည်ပါ။
(2) ယတြာချေရုံဖြင့် သင်တို့ ကံကြမ္မာကိုပြောင်းလဲနိုင်ပြီဟု မထင်မြင်ပါ။
(3)ဓါတ်ရိုက်ဓါတ်ဆင်လုပ်ခြင်းဖြင့် ကြံတိုင်းအောင် ၊ ဆောင်တိုင်းမြောက်မည်ဟု မထင်မြင်ပါ။ ။ ကံကောင်းလာမည်ဟု မထင်မြင်ပါ ။
(4)။ ဗေဒင် ဟောခန်းသို့ရောက်ဖူးပါသည်။ ။ ၄င်းတို့သည် များသောအားဖြင့် အရှ့တွင်ဖြစ်ခဲ့ သည်များ ကို မဟော ကြပါ.။ နောင်တွင် ဖြစ်မည်သည်များ ကိုသာ ဟောပြော ကြပါသည်။ နောင်တွင် ဖြစ်မည် ဟောချက်များသည် ကိုယ်တိုင် ကြိုမသိပါသဖြင့် မှန်ကန်သည် ဟု မယူဆပါ။
ဟား ဟား၊ etone ကြီးများခုန်လိုက်တာလားလို့ တုန်နေမယ့် (တုန်တုန်တုန်ဖြစ်နေမယ့်) ပုံကြီးကို မြင်ယောင်ကြည့်နေတုန်း ….Aww သူငယ်ချင်းလား။ etone သူငယ်ချင်းဆိုမှတော့ မယ်တော်တောင် မယ်တော်ပြန်ခေါ်ရအောင် စွမ်းနိုင်ပါပေရဲ့။
ဟား ဟား၊ etone ကြီးများခုန်လိုက်တာလားလို့ တုန်နေမယ့် (တုန်တုန်တုန်ဖြစ်နေမယ့်) ပုံကြီးကို မြင်ယောင်ကြည့်နေတုန်း ….Aww သူငယ်ချင်းလား။ etone သူငယ်ချင်းဆိုမှတော့ လဲ မယ်တော်တောင် မယ်တော်ပြန်ခေါ်ရအောင် စွမ်းနိုင်ပါပေရဲ့။
etone မဟုတ်ဘူးလို့ မထင်
ဖတ်ရင်းနဲ့ ဒေါ်တုံပုံကို မြင်ယောင်ပြီး ပုံဖော်လာတာ အဆုံးကြမှ မဟုတ်ဘူးတဲ့။ ဗေဒင်ပညာက အမှန်တကယ်တော့ ရှိပါတယ်။ အခုဟာက လူတွေက တတ်ယောင်ကားနဲ့ လုပ်စားညာစားကြတာ ဆိုးတာ။ ယုံတဲ့သူကလည်း ယုံလို့ ညာတဲ့သူကလည်း ညာလို့ရတာပေါ့နော့။
ဗေဒင်ဆိုတဲ့ပညာရပ်ဟာ ဘုရားမပွင့်ခင် ဟိုးအချိန်ကတည်းကရှိခဲ့တာပါ။
ဗေဒင်ဆရာတိုင်းကိုသာ မယုံကြည်သင့်ပါ။ ၀င်တယ်၊ထွက်တယ်၊ပူးတယ်၊
ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့အကြောင့်အရာ တွေကို ၇၅%လောက်မှန်အောင်ပြောနိုင်တယ်ဆိုကတည်းက
ဖြစ်လာမည့်အကြောင်းတွေကို ယေဘုယျ ပဲပြောလို့ရပါတယ်။
မေးသူရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားအရ လုပ်ပုံကိုင်ပုံ (ကံပြုပုံ)ပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့အတွက်ပါ။
တဲ့အတွက် ဆိုးကျိုးတွေ ပပျောက်သွားရတာမျိုးပါ၊လက္ခပါပြောင်းတယ်လို့ကြားဖူးပါတယ်။
ယတယာခြေယုံနဲ့တော့ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါ၊ မိမိကိုယ်တိုင် ပြုပြင်ယူမှရနိုင်မည်လို့ထင်မိကြောင်းပါခင်ဗျာ။
ဗေဒင်ဆရာအကြားအမြင်ဆရာတွေ …စားကွက် ပျက်အောင်လုပ်နေပြန်ပါပြီ
အကြားအမြင်တွေ ဗေဒင်တွေ ယတြာတွေတော့မယုံဘူးဗျာ..နတ်ကို ပိုမယုံဘူး
ဒါပေမယ့်လူတွေမှာ ကံ/စိတ်/ဥတု/အဟာရ ဆိုတာတွေနဲ့တော့ ဆက်စပ်နေထိုင်ကြရတာဆိုတော့
ကံကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ပြသနာကိုကံနဲ့ကုစားလို့ရပါတယ်
စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာလဲ စိတ်နဲ့ပဲ ကုစားရတာပဲလေ
ဥတု/အဟာရလဲ ဒီလိုပါပဲ ကုစားလို့ရပါတယ်
ဒီဟာတွေကြောင့် ဒုက္ခတွေ့နေကြတယ် ဆိုရင်တော့ ကုစားလို့ရပါတယ်လို့ပြောရပါမယ်
ရာထူးတိုးဘို့ နေရာကောင်းရဘို့ စီပွားတက်ဘို့ဆိုတာတွေအတွက်ကတော့
ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာ အားကိုရာလို့ ဆိုချင်ပါကြောင်း…။။။။
အီးတုံးကတော့ တကယ်အောက်မေ့နေတာ …
ဗေဒင်မယုံလို့ တစ်သက်လုံးမှာမှ တစ်ခါတည်းသာ သူငယ်ချင်းအဖော်ကောင်းလို့ မေးဖူးတယ် …
etone မှ etone ပဲ ဖြစ်ရမယ်။
မဟုတ်ပါဘူးဆို .. ဟွန့် :(
ဒေါက်တာကိုကို့ ရဲ့ မာမား ကတောင်
အားကိုးအားထား ပြုနေရပြီ ဆိုတော့
အဖော်ကောင်းလို့ ဗေဒင်မကြာခဏ မေးဖူးတယ်။ RIT တက်ရင်းမေးတာကို ဝိဇာဘွဲ့ရမယ်တဲ့။
အဲဒါလည်း အမှတ်မရှိဘူး။ မေးတယ်။ မှားတယ်။
နောက်မှ ညီမလေးတစ်ယောက်ကပြောတယ်။ ဘုန်းကြီးတဲ့လူဆိုရင် ဗေဒင်တွက်ရင်မမှန်တတ်ဘူးတဲ့။
အဲဒီတော့မှပဲ ကိုယ့်အခြေအနေ ကိုယ်သိတော့တယ်။
ဘုန်းကြီးတဲ့လူဆိုရင် ဗေဒင်တွက်ရင်မမှန်တတ်ဘူးတဲ့။ ဘုန်းကြီးတွက်တဲ့ ဗေဒင် ပိုမမှန်သေးတယ် မမရေ့………..
ကောင်းလိုက်တဲ့ ရိုက်ချက် ဗေဒင်ဆရာမ ဘယ်လိုကျန်ရစ်ခဲ့လဲ မသိဘူးနော်။
၁။ ။ ဗေဒင်၊ အကြားမြင် ၊ယတြာဆိုတာမျိုးကို သင်တို့ လက်ခံယုံကြည်ခဲ့ကြသလား ။ လက်မခံပါ
၂။ ။ ယတြာချေရုံဖြင့် သင်တို့ ကံကြမ္မာကိုပြောင်းလဲနိုင်ပြီဟု ထင်ပါသလား ။ မထင်ပါ
၃။ ။ ဓါတ်ရိုက်ဓါတ်ဆင်လုပ်ခြင်းဖြင့် ကြံတိုင်းအောင် ၊ ဆောင်တိုင်းမြောက်မည်ဟု သင်ထင်ပါသလား ။ သင်ဧ။် ကံကောင်းလာမည်ဟုထင်ပါသလား ။လုံးဝမထင်ပါ
၄။ ။ မည်ကဲ့သို့သော ဗေဒင် ဟောခန်းသို့ရောက်ဖူးပါသလဲ ။ ၄င်းတို့ဧ။် ရှေ့ဖြစ် ၊နောက်ဖြစ် ဟောပြောချက်များသည် မှန်ကန်သည်ဟု လက်ခံရုံကြည်ပါသလား ။ကြီးကျယ်ခန်းနာတဲ့ဟောခန်းတွေတော့မရောက်ဘူးပါသူငယ်ချင်းတွေနဲ့တော့
နတ် ဗေဒင်ယတြာ ဆိုတာတွေကယုံကြည်သူတွေအတွက်ကတော့လုပ်သင့်ပါတယ်
သူငယ်ချင်းဆိုတာ မယုံဘူးဟေ့ … etone မှ etone ပဲ ဖြစ်ရမယ် …
အဲ့ဒိတော့ ဗေဒင်ကမကောင်းတာဟောလဲပြုံးပြုံးဘဲ မဖြစ်လာဘူးလို့မှတ်တာကိုး
မကြိုက်လို့သာ မမေးဖြစ်တော့တာ မမေးတာကြာတော့လဲမမေးချင်တော့ဘူး
အမျိုးသားပြောသလိုဆို ကိုယ့်ကံကြမ္မာ ကိုယ်တောင်မမြင်နိုင်တာ တခြားသူကပိုတောင်မမြင်နိုင်သေးတယ်
ပထမနှစ်တက်နေတုန်းက အန်တီတစ်ယောက်နဲ့မြောက်ဥက္ကလာက ဟောခန်းတစ်ခုကိုရောက်ဖူးတယ် အန်တီကလည်းအဲဒီကို ပထမဆုံးရောက်ဖူးတာ သင်္ဘောလိုက်နေတဲ့သားအတွက်မေးချင်လို့တဲ့
အခန်းထဲဝင်ဝင်ချင်းပဲ အဲဒီကဘွားတော်က မိုးစက်ကိုကြည့်ပြီး ဒီနှစ်ဆယ်တန်းအောင်ချင်ရင် ငါပြောသလိုလုပ်ဆိုပြီးအမိန့်သံနဲ့စပြောလိုက်တော့ မိုးစက်တို့တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ကြည့်ပြီး ဘာလုပ်ကြမလဲပေါ့။ အဲဒီအချိန် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်အန်တီ့ဖုန်းဝင်လာလို့ နောက်မှပြန်လာမယ်နော်လို့ပြောပြီးပြန်ခဲ့ကြတယ် အိမ်ရောက်တော့ပြောပြီးရယ်လိုက်ရတာအူတောင်နာတယ်
အီးတုံးထခုန်တာ ဟန်ဆောင်တာ မဟုတ်ဘူး၊ ကြွက်ဖြတ်ပြေးသွားလို့။ အခုတော့ ဆရာမအိမ်မှာ ကြောင်မွေးထားလိုက်ပြီ။
အမြီးကနေကိုင်ပြီး ငါးပိရည်နဲ့ တို့စားလိုက်မယ် … (MoeZ ရဲ့ ပို့စ်ထဲကလို )
ဗေဒင်လက္ခဏာ နက္ခတ်ပညာ များကိုယုံကြည်ပါသည်။
လက်တွေ့နှင့်ယှဉ်ပြီးလေ့လာရာမှ ယုံကြည်သွားရခြင်းဖြစ်ပါသည်ခင်ဗျား …..။
ဘုရားကို ဘုရားဧကန်စင်စစ်ဖြစ်ရမည်ဟုဟောနိုင်သည့်ပုဏ္ဍားမှာ ခြေခဏာကိုကြည့်ပြီးဟောသည်ဟု
အပြန်အလှန်လေးဆွေးနွေးလိုပါသည် ဆိုလို့ … ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လေးဖက်ရေ… ။
မြတ်စွာဘုရားပွင့်စဉ်ကတည်းက ဗေဒင် လက္ခဏာရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ် … ဒါပေမယ့် တဆင့်ဆင့် တိမ်ကောလာတဲ့ ပညာရပ်မှာ ဟန်ဆောင်မှုတွေရောထွေးလာတဲ့အခါ … အတော်များများက ဟန်ဆောင် လိမ်လည်တာမျိုးသာ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်…. ။ စိတ်ပုတီးစိတ်လို့ သမထအားကောင်းလာတာနဲ့အမျှ ရှေ့ဖြစ်နောက်ဖြစ်လေး နည်းနည်းမြင်လာမယ်… အဲ့ဒါလေးတွေကို အခြေခံပြီး ပြောနေကြတာများတယ် … ။ အမှန်ထက် ဟန်လုပ်တာကများတယ် … ။
လေးဖက်ရေ… သမီးတို့အိမ်ရှေ့က အစ်မတစ်ယောက် ဆယ်တန်းအောင်စာရင်းမထွက်ခင်ဗေဒင်မေးတော့ … အောင်မယ် ဂုဏ်ထူး၂လုံးနဲ့ဆိုလို့ ရပ်ကျော်ရွာကျော် စည်စည်ကားကား မုန့်ကျွေးပြီး ကြိုပျော်ခဲ့ကြတယ် …တကယ်အောင်စာရင်းလည်းထွက်ရော … ကျပါတယ်ဆိုမှ မဟာအရှက်တော် ဗျမ်းဗျမ်းကွဲပါရောလေ … ။
သမီးသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဗေဒင်မေးတုန်းက အတူပါလာတဲ့ သူငယ်ချင်းထဲက တယောက်ကို လက်ညှိုးထိုးပြီး …သူက ညည်းဘ၀ရဲ့ ဖူးစာရှင်ပဲ ဘုရားပေးတဲ့ လူ ၊ ဘာညာစသည်ဖြင့် လျှောက်ပြောပြီး … အခုများတော့ … အဲ့ဒီသူငယ်ချင်းတောင် မိန်းမရလို့ သားတွေ သမီးတွေနဲ့ စည်ပင် ပျော်ပါးနေလိုက်တာ … ဟီးဟီး ..
လေးဖက်ရဲ့ ကိုယ်တွေ့ ဗေဒင် လက္ခဏာ နတ်က္ခတ်ပညာမှန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေး ဗဟုသုတအနေနဲ့ ပြောပါဦးနော် … ။
” ယင်း ပညာများဖြင့်လူအချို့ ကိုကယ်တင်ခဲ့ဘူးပါသည် ”
ဟယ်….. ဒါမှ ဒို့ ဦးဖက် ( fatty ) ကွ ။
ကျွန်တော်လည်း ဗေဒင် လက္ခဏာ နက္ခတ် ပညာ များကိုယုံကြည်ပါသည် ။
အမှန်တကယ် ရှိသောပညာရပ်များ ဟု ယုံကြည်ပါသည် ။
တကယ် တတ်ကျွမ်းသော ပညာရှင် ဟုတ်မဟုတ်သာ ပြဿနာ ရှိပါသည် ။
နတ် ကိုတော့ သိပ်မယုံပါ ။
နတ် ရှိတာ လက်ခံပါသည် ။
But နတ်ကတော်ကို မယုံရဲ ခြင်းဖြစ်ပါသည် ။
ကျွန်တော်လည်း ဗေဒင် လက္ခဏာ နက္ခတ် ပညာ များကို နဲနဲ လေ့လာထားတယ် ။
လက္ခဏာ နဲနဲ မှန်အောင် ဟောနိုင်တယ် ။
မဟာဘုတ် ဗေဒင် နဲနဲ ရတယ် ။
ဦးဖက် နဲ့ အဲဒီ အကြောင်းတွေ PM ကနေ နဲနဲ ဆွေးနွေး လို့ရမလား ။
Rumour တွေ ၊ Gossip တွေ ၊ အတုအယောင် ပညာတွေက
ခဏလေးနှင့် ပျောက်ကွယ်သွားကြတယ် ။
အဲ ၊ နှစ်ပေါင်း ထောင်ချီပြီး ပြန့်နှံ့နေပြီဆိုရင် ၊
လွယ်လွယ်လေး လျှော့မတွက်ကြပါနှင့် ၊
သူ့နောက်မှာ ခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ
ပညာတွေ ရှိနေတတ်ပါတယ် ။
Koyinmaung ပြောသလိုပဲ .နတ် ဗေဒင်ယတြာ ဆိုတာတွေကယုံကြည်သူတွေအတွက်ကတော့လုပ်သင့်ပါတယ် မယုံကြည်သူတွေအတွက်ကတော့မယုံတာပဲကောင်းပါတယ်..ကျွန်တော်လည်းမယုံကြည်တတ်ပါဘူး.
ဟောဗျာ.၄ ရက်ပဲကြာလိုက်တယ်..ခုရန်ကုန် ဆာကူရာဆေးရုံမှာတက်နေရတယ်..
ခုဆို နဂိုကမှ ယုံတတ်တဲ့သူ.ပိုဆိုးပြီပေါ့နော်..
etone ကျွန်တော်တော့ ဗေဒင် ကို တစ်ခါပဲသွားမေးဘူးတယ်။ မှန်ပါတယ်။
ကံတရားဆိုတာ အသေရေးမှတ်ထားပြီးသားလို့ မယုံတဲ့အတွက် ရှေ့ဖြစ်ဆိုတာ
အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပဲ မှန်နိုင်လိမ့်မယ်။ နို့မို့ဆို လူဟာ ကိုယ့်ကံကြမ္မာကိုယ်
ပြောင်းလဲဖို့ အခွင့်မရှိရာရောက်သွားလိမ့်မပေ့ါ..။ကျွန်တော်က ဗေဒ တွေ
ဝေဒတွေ ဂမ္ဘီရတွေ ကို နှစ်အတော်ကြာအောင် လေ့လာခဲ့ဖူးတယ်..။
ယုံဖို့ မယုံဖို့ ကိစ္စကတော့ ကာယကံရှင်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းပါပဲဗျာ။
ကျွန်တော် တင်ဖူးတဲ့ နေ့စဉ်အသုံးချ ဂမ္ဘီရ တွေကို ဖတ်ကြည့်ရင် ဂမ္ဘီရ
ဒဿန ကို နည်းနည်းများ ရိပ်စားမိမလားပဲ..။
(အစစ်တစ်ခု အတုတစ်သိန်း ဆိုတော့ကာ အစစ်အမှန်ပညာရပ်က
တဖြည်းဖြည်း တိမ်ကောသွားပုံ ရတယ်..သို့သော်လည်း ကမ္ဘာတစ်ဝှန်း
စစ်တမ်းကောက်ကြည့်ရင် ဗေဒင်ကို ယုံတဲ့လူက မယုံတဲ့လူထက် ပိုများ
ဗေဒင်တို့ နတ်ယတြာတို့ကို လုံးဝမယုံတာ
ဒီအသက်အရွယ်ထိရောက်နေပြီ တစ်ခါမှာကို ဗေဒင်ဆိုတာ
မမေးခဲ့ဖူးဘူး … ကိုယ့်ဘဝရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ နေ့ရက်ကိုတောင်
ဗေဒင်မမေးခဲ့ဘူး ဒီအတိုင်းပြက္ခဒီန်ကို ကြည့်ပြီး လက်ထောက်ရွေးခဲ့တာ …….
ကျုပ်က.. ဗေဒင်နက္ခတ်ရော..။ လက္ခဏာဟောတာရော၊ အကြားအမြင်ရော..ယုံပါတယ်..။
တကယ်တော့.. ဒီပညာရပ်တွေဟာ.. မြန်မာပြည်ရဲ့ ရှေးစွန်းစွဲဘာသာရေးနဲ့..နတ်တွေနဲ့ လုံးသမလည်ပြီး.. လူတွေအထင်သေး… အရည်အသွေးကျဆင်းကုန်.. တာပါ..။
အဲဒီလိုနဲ့..ပညာရပ်နဲ့လုပ်စားတဲ့သူ.. ၉၉ရာနှုန်းက.. ပညာရပ်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ကြတယ်လို့.. တွေးမိတာပဲ..။
လရဲ့ဆွဲငင်အားကတောင်.. ပင်လယ်ရေကို ဒီရေအဖြစ်ကြွတက်စေရင်..တခြားဂြိုလ်ဆိုတဲ့..ဒြပ်အစိုင်အခဲတွေကရော.. လူ့ခန္တာကိုယ်ထဲက..သွေးတွေ.. ဆဲလ်တွေ..ဘာလို့မပြောင်းလဲနိုင်မှာလည်း..
ဒီအပြောင်းအလဲတွေက.. စိတ်(နာမ်)ကိုလည်း.. ပြောင်းလဲစေမှာပဲ..။
လူသားရဲ့လက်ဖ၀ါးမှမဟုတ်.. ခန္တာကိုယ်ရဲ့ဘယ်အပိုင်းမဆို.. အကြိမ်သန်းချီ တနေရာထဲနေ့တိုင်းလှုပ်နေရင်.. အရေးအကြောင်းပေါ်တယ်..။
လက္ခဏာဖတ်တယ်ဆိုတာက.. လက်လှုပ်လို့ ဖြစ်တဲ့အစင်းကြောင်းတွေကို ကြည့်ပြောတဲ့..သဘော..
လက်ချောင်းတွေလှုပ်တာဟာ.. လှုပ်ပုံလှုပ်နည်းတွေဟာ.. အဲဒီလူ့စိတ်ဓါတ်နဲ့.. အချိုးကျတယ်လို့ပြောနိုင်တာပဲ..။
လက်မအလှုပ်များရင်.. အသက်လမ်းကြောင်း ထင်ရှားရှည်နေတာမျိုး ဖြစ်နိုင်တာပဲလေ..။
ဗေဒင်နက္ခတ်ရော..။ လက္ခဏာဟောတာရောဆိုတာက..ဒါတွေကို.. လူ့သမိုင်းတလျှောက် စံနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ထားပြီး လေ့ကျင့်ကျက်မှတ်ထားတဲ့ပညာရှင်က.. လာမေးတဲ့လူတွေကို.. ပြန်ပြောတဲ့ပညာရပ်တွေပဲ..။
ပြန်ပြောတဲ့သူရဲ့.. လေ့လာနိုင်မှုစွမ်းအားနဲ့.. အရည်အချင်းပေါ်မူတည်ပြီး.. ခန့်မှန်းချက်တွေမှန်နိုင်တာပေါ့…
chaos theory ခေးရော့သီအိုရီက.. ဗရမ်းဗတာထဲစံနစ်တကျဖြစ်ခြင်းပေါ့..။
ရန်ကုန်ကန်တော်ကြီးပန်းခြံထဲက လိပ်ပြာတကောင်တောင်ပံခတ်ရင်.. ယူအက်စ်ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှာ မုန်တိုင်းတိုက်သွားနိုင်တယ် ပြောတဲ့သီအိုရီပဲ..။
လူတယောက်…မနက်အိပ်ယာထ.. တချက်ကလေးသမ်းဝေလိုက်တဲ့.. တစက္ကန့်အချိန်ဟာ.. အိမ်ကအထွက်မှာ..အပေါ်တိုက်ခန်းက ပြုတ်ကျလာမဲ့.. ပန်းအိုး..ခေါင်းထိမဲ့.. မတော်တဆဖြစ်မှုတခုကို ရှောင်လိုက်နိုင်သလို… အဲဒီမတော်တဆကြောင့် အဲဒီသူ..ခေါင်းတည့်တည့်ထိပြီး.. အချိန်ကိုက်ကွက်တိသေသွားဖို့လည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ..။
ဟုတ်သလိုလိုနဲ့ .. သဂျီးပြောမှ ရှုတ်သွားပြီ
လေးဖက်နဲ့ ဘကြီးတော် နိုင်ငံခြားသားကြီးရေ လေ့လာမိသမျှလေး ပြန်ပြောပြကြပါဦး … ။
ဗေဒင်ကိုလည်းယုံတယ်။ လက္ခဏာကိုလည်းယုံတယ်။ ကိုယ်၁၀တန်းမဖြေခင်တုန်းက အစ်ကိုတယောက်ကဗေဒင်ဟောတယ်။ နှစ်ခြင်းပေါက်အောင်မယ်။ ဂုဏ်ထူးလည်းတစ်ဘာသာဘဲပါမယ်လို့ပြောတယ်။ သူပြောတဲ့အတိုင်းဘဲ တစ်ဘာသာဘဲပါတယ်။ ပြီးတော့မနှစ်ကမြန်မာပြည်ခဏပြန်တော့ ဗေဒင်သွားမေးတော့ဗေဒင်ကဘာဘဲလုပ်လုပ် နှစ်ခါပြန်လုပ်ရမယ်လို့ပြောတယ်။သူပြောတဲ့အတိုင်းပါဘဲ အခုချိန်ထိနှစ်ခါပြန်လုပ်နေရတုန်းဘဲ။ လုပ်လို့မပြီးနိုင်သေးဘူး။